Waa kuwan shanta qodob ee lagu inqilaabay doorashada dalka ee carada dhaliyey - Bulsho News
Waa kuwan shanta qodob ee lagu inqilaabay doorashada dalka ee carada dhaliyey
Shirkii ay Golaha Wadatashiga Qaran ee Soomaaliya ku yeesheen magaalada Muqdisho, 21-kii iyo 22-kii bishan, waxa ay ku heshiiyeen hab raaca doorashada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka Federaalka ee soo aaddan.
Sidoo kale waxay madaxda isla soo qaadeen in habraaca doorashada xildhibaanada Aqalka Sare ee Somaliland xal laga gaaro.
Haweenka ayaa loo asteeyay in ugu yaraan 30% ay ka noqdaan ergada, halka ergada Banaadiriga iyo Somaliland ee ka codeynaya Muqdisho ay soo xulayaan odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ee la isla ogolyahay.
Ergadaas waxaa ugu dambeyn hubinaya guddiga maamulka doorashada Somaliland iyo Banaadiriga, halka xafiiska Ra’iisal Wasaaraha uu kor joogtaynayo qodobkaas.
Markii si dhaw loo darso heshiiska ay magaalada Muqdisho ku gaareen Golaha Wadatashiga Qaran ee Soomaaliya, waxaa soo baxaysa in inta badan qodobadda heshiiskaasi uu awoodda doorashada xildhibaannada Golaha Shacabka ee baarlamaanka federaalka, gacanta u galiyay madaxda maamul goboleedyada.
Midowga musharraxiinta mucaaradka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay heshiiska ay Golaha Wadatashiga Qaran ee Soomaaliya ku gaareen magaalada Muqdisho.
Galka Baarista: Haamaha sumeysan ee lagu daadiyo baddda...
Puntland oo ambabixisay qaar kamid ah dadkii laga...
Hong Kong’s patriots-only government to tackle housing woes,...
Muxuu yahay heshiiska ka careysiiyey Turkey ee ay...